CNG Fired 10 New Bus amalite na Kayseri | RayHaber
Homeụgbọ okporo ígwèCNG mepụtara 10 New Bus Service malitere na Kayseri
CNG mepụtara 10 New Bus Service malitere na Kayseri
16 / 08 / 2018 ụgbọ okporo ígwè, General, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
Onye isi obodo nke Kayseri Metropolitan Mun ikelik gosipụtara bọs gas ndị azụtara ọhụrụ ma kwupụta na ha na-azụta ụgbọ ala 3,5 kwa afọ.
Obodo ukwu ahụ na-aga n'ihu na-ewetara ndị na-ebugharị ụgbọ njem ọhụụ nke ndị ọhụrụ na Kayseri iji mee ka ọ dịkwuo mfe njem ụgbọ njem n'obodo ahụ. Mayor Mustafa Celik, Republic Square na mmemme na ọnụ ahịa nke ndị ọhụrụ natara ihe dịka 16,5 nde TL 10 mita ogologo nke bọmbụ ndị ọkpọkpọ ekpughere ọha mmadụ. Mayor Celik, 18 ọnụọgụ bọs ndị a na-enweta kwa afọ, na-eru 3,5'e kwuru na ọnụ ọgụgụ a na-egosi itinye ego dị oke mkpa.
Iji mee ka nkwalite obodo anyị gaa n'ihu, ọgbọ ọhụrụ nke ndị na-anya ụgbọ njem ọha maka nkwalite nke Republic Square na emume nke Mayor Mustafa Celik, yana Onye isi oche AK Party, Saban Copuroglu, ndị isi ọwa, ndị isi ụlọ ọrụ na ụmụ amaala gara.
MAKA ha anwetaghị ihe mmụta site n'obere ahụ anyị tụbara ”
N'okwu ya na mmemme mgbasa ozi mgbasa ozi, Mịnịsta Çelik, onye mere nyocha banyere atụmatụ mba ahụ, kwuru, sịzị ị maara na mba anyị nwere ụjọ akụ na ụba. 15 Site na aghụghọ aghụghọ nke ọnwa Julaị, ndị ajọ mmụọ, ndị na-enweghị ike ịchịkwa uche anyị, ọbụbụeze na nnwere onwe ha, nwara iji mezue ọrụ ha site na ụjọ akụ na ụba. Ya mere, 15 apughi imuta ihe site na onodu nke mba a na July. Ya mere, 15 amughi ihe site na slaps nke anyi tufuru ndị ohi na ndị ha na ha rụkọtara na July. 15 afterbọchị na-esochi July, anyị ga-eji uche Chineke mebie ụjọ nke akụ na ụba, dịka anyị kpaghasịrị atụmatụ 40 kwa afọ. Dịka oge niile, aga m achọ igosipụta ekele m nye Onye isi ala anyị Recep Tayyip Erdoğan na mba ndị nsọ anyị nke na-edoghị onwe ya ala na ike ọ nwetara site na mba ya na-alaghị azụ.
“ANY NOT ANY G ANA AN” AN ”ỌB” ”
Onye isi obodo 15 Mustafa Celik kwusiri ike na dịka ndị isi obodo nke Kayseri na-aga n'ihu itinye ego ha n'adaghị nwayọ na usoro ụjọ akụ na ụba dịka ọ dị na usoro July, ọ gara n'ihu: medik anyị ewepụghị gas na belata belata oge anyị. 15 Ozugbo July gachara, anyị gara n’ihu itinye ego anyị site na ịtọ ntọala nke Hulusi Akar Boulevard ma ugbu a anyị na-aga n’ihu itinye ego anyị na mpaghara niile na-enweghị nwayọ. Dị ka ị gbaworo ama, anyị na-agba mbọ ehihie na abalị na ngalaba niile site na akụrụngwa ruo na ntughari ime obodo, site na ọrụ mmekọrịta ọha na eze gaa na ọrụ ndị ga-abawanye mmepụta. Anyị na-etinye ego itinye ego na mpaghara niile ka anyị na-enyekwu mkpa maka ụgbọ njem. Ya mere, anyị kwupụtara afọ gara aga dị ka Afọ ofgbọ njem. N'ime usoro a, anyị amalitela iwu boulevards atọ dị iche iche. Na mgbakwunye na ndị jikọtara ọnụ ụlọ dị ugbu a, anyị ebidola ịrụ ọrụ nkedo nke 13 nwere ọtụtụ ụlọ ma mezue oge a. Anyị gbasaa okporo ụzọ anyị dị ugbu a, mee ndokwa na ụzọ nbata anyị ma mee ka usoro okporo ụzọ dị mfe. Anyị ekwughi afọ a dị ka Afọ Transportgbọ njem, mana anyị na-aga n’ihu itinye ego anyị na-aga n’ihu. Ọ bụ ezie na anyị na-eme ka akụrụngwa ụgbọ njem ka mma n'otu aka, anyị na-agba mbọ ịgbasa njem ụgbọ njem ọha na-eme ka ọ dịkwuo mma. "
3,5 133 BUS N’afọ
Obodo ukwu na-aga n'ihu na-eto ma na-eme ka ụgbọ njem ụgbọ mmiri dị ọhụrụ na-anya ụgbọ ala, Mayor of steel, ọnụ ahịa ụgbọ elu na-efu ihe dị ka mita 16,5 18 nke otu 10 gbakwunyere ụgbọ ala gas ndị ọzọ. Mayor Çelik kwuru na ha azụtalarị usoro ụgbọ oloko 30 iji gbasaa njem ọha na eze wee sị, "Mgbe ahụ, azụta bọs anyị malitere. Anyị gbakwunyere na 35 ngụkọta ụgbọ mmiri anyị na 50, emesịa 20, emesịa 105. Taa, ụgbọ ala 10 sonyekwara na netwọkụ anyị. Mita 18 ndị a, anyị na-akpọ ndị ọkpọ, ga-arụ ọrụ n'okporo ụzọ dị larịị nke obodo anyị. Anyị mekwara obi anyị maka bọs eletrik ma ọrụ ụgbọ ala ndị a ka na-aga n'ihu. Anyị ga-ebukwa bọs ndị a site n’ụbọchị ndị na-abịa. Nọmba 8 nke ụgbọ ala eletrik ga-adị mita 25 na nha nke ụgbọ ala ụgbọ ala. Na mgbakwunye, anyị na-azụta 18 mita nke bọs eletrik 10 n'ogologo bọs ndị anyị na-akwalite taa. N'ihi ya, 3,5 bu ngụkọta ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala anyị na-azụ kwa afọ
N’igosipụta na ha ga-aga n’ihu n’ọrụ n’enweghị nsogbu ọ bụla metụtara ha, Onye isi ala Mustafa Celik kwuru na ụjọ ma ọ bụ akụ na ụba enweghị ike igbochi onwe ha ịgbalịsi ike maka obodo a na obodo a. Onye isi obodo Celik kwupụtara n’ọchịchọ ya na ọgbọ ọhụrụ nke ụgbọ njem ọha na eze ga-abụ obodo nke obodo anyị.
Mayor Mustafa Celik, mgbe okwu ya na ndị sonyere nyochara ngwaọrụ ọhụrụ ahụ. Ginye ozi banyere ugbo ala, Transportation Inc. Onye isi njikwa Feyzullah Gündoğdu, ikike njem ụgbọ ala nke 145 nke ikuku gas nwere omume na okike, o kwuru. Na nke njem nchekwa usoro na Gundogdu 24 awa nke na-ekwupụta na ọ pụrụ hụrụ ụgbọala online, ụgbọ ala na mgbakwunye, otu n'ime Turkey mbụ "mberede button" kwuru nwere ike bụ na, na-ekwupụta oti mkpu ka ọ bụla negativity management nsoro site ndị a bọtịnụ na-kewapụrụ n'ime ndị center. Onye isi obodo Mustafa Celik, kwusiri ike na ịdị mma ndị ụgbọ ala ahụ kwuru na ụdị ikuku niile dị n'ụgbọ ndị a.
Ndị ọhụrụ gbara ụgbọ ala zụrụ ọhụrụ Mayor Celik, ndị ọkwọ ụgbọ ala distrikti na ụmụ amaala na ntinye aka na convoy Republic Square n'ihu Mgbakọ Obodo. The ugbo ala ga-eje ozi na agbata Kayseri.
Obodo Düzce nwere 13 Number Cng Buses
Ngwongwo nke ụgbọ ala mbụ nke Europe na-amalite nyocha
Ụlọ na CNG nọ na Duzce
Ngwá Egwu si Kayseri Metropolitan Municipality ka 30 Million TL
Ejiri 24 New Bus Gigure na Kocaeli
28 New Bus Line Na Denizli Na 18 August Day Daha
22 Million TL Project si DTSO
BozankayaEtinye ego 70 nde TL na R&D
Achọkọ ahụ ike, Mmepụta Ngwaọrụ azụmahịa nke Temsa na…
10 agaghị enwe ike ịbanye İZBAN n'enweghị TL
Onu ogugu nke ugboala edere na Sakarya 8 Percentage kwa afo…
Usoro ihe omume Mega ga-alaghachi na TL?
Zụta Kaadị 15 TL maka Transportgbọ njem Ndị agadi na Bursa…
Dollar Dry, Ugwu Kụrụ Kaadị Car Ahịa